Ugaadhsiga DIINKA Oo Suuq Cusubi U Furmay iyo Maamulka Gobolka Sanaag Oo Digniin Ka Soo Saaray | SDWO.COM & SomalilandNews.net
Ugaadhsiga DIINKA Oo Suuq Cusubi U Furmay iyo Maamulka Gobolka Sanaag Oo Digniin Ka Soo Saaray
Ceerigaabo (SDWO): Badhasaabka Gobolka Sanaag ayaa ka hadlay Gaadiidka Shirkadda Bari iyo Galbeed oo dhawaan Dad aan la aqoonsan ku rasaaseeyeen inta u dhexeeya Magaalooyinka Burco iyo Ceerigaabo.
Badhasaabka Gobolka Sanaag Maxamed Cabdi Falay oo shir-jaraa’id ku qabtay Xafiiskiisa Ceerigaabo ayaa sheegay in aanay ogolaanayn in Dhul Jiif ka dillaaco Deegaannada Gobolka Sanaag oo Gacan adag lagu qaban doono Cid kasta oo isku dayda waxyaabahaasi amniga Gobolka lidka ku ah.
Badhasaabka oo Arrimahaa ka hadlayayna waxa uu yidhi “Shaqaaqadii ka dhacday Gaadhigii weynaa ee Horumarka soo kordhiyey ee Gobolka Sanaag la keenay ee ahaa Shirkadda Bari iyo Galbeed. Gaadhigii Ciddii waxyeelaysay (ee rasaaseysay) baadhitaankeedii waa lagu jiraa, meel fiican bayna maraysaa oo heer Booliis illaa Heer Maxkamadeedba.
Booyaddiina hawsheedu way soo dhamaatay, Booyadda Rag aan iyada u jeedin ayaa hawshu ka yar timid (Dhibaataynteedu), markaa taana hawsheedii way soo gebogabowday.”
Badhasaabku wuxuu Digniin u diray Dadka isku dayaya inay ammaanka waxyeeleeyaan “Gacan bir ah ayaanu ku qaban doonaan, oo sidii aanu u qabanay kuwii hore ayaanu u qaban doonaa Cid kasta oo isku dayda inay Dhul Jiif iyo wax la mid ah meesha keenaan.” Ayuu yidhi badhasaabku.
Waxaanu intaa sii raaciyey oo uu ka hadlay Xayawaanka DIINKA oo aad looga guranayo deegaannada Gobolka Sanaag “Waxa aad iyo aad Cidhiidhi loogu hayaa Xayawaanka DIINKA Qolofta leh ee Gurguurta ee la wada yaqaanno, Diinkii waa laga ururiyey Arladii, waxaanu leenahay waar ILAAHAY ka yaaba waa Xayawaane, wax alaale iyo wax aad ku falaysaan garan mayno. Diinku waa ugaadhii Dalka, markaa Cid alaale iyo Ciddii la noogu soo sheego (Inay guranayso) waajibkooda ayaanu ka qaadi doonaa Haddii Alle yidhaahdo.”
Badhasaabka Gobolka Sanaag Maxamed Cabdi Falay waxa kale oo uu ka hadlay Dad si Sharci-darro ah u guranaya Macdan ku jirta Gobolka Sanaag “Ciidan uu hoggaaminayey Taliye ku-xigeenka Ciidanka Booliiska Gobolka Sanaag ayaa Qalabkii ay meelahaa ku baadh-baadhanayeen (Dadka Macdanta Guranayaa), Dadkaa waxaanu leenahay ma guran karaan Dahab iyo Macdan kale toona, Dadkuna ha soo sheegaan (Cidda guranaysa), Sifo Sharci-Darro ah kuma guran karaan, waayo?
Dalka Dawlad baa ka jirta oo Wasaaradda Macdanta iyo Tamarta ayaa u xil-saaran, markaa Ciddii rabta inay hawshaa wax ka qabato Sifo Sharci ah ayuun baa loo marayaa (ayaanu leenahay), waan ku cel-celinayaaye ka waantooba oo Dhulkaasi yaanu noqon Dhul Fawdo ah oo Nabadgalyo darro ka timaaddo”ayuu yidhi Falay.
Ugu dambayn, Maamulka Shirkadda Bari iyo Galbeed eel eh Gaadiidka iskaga kala goosha Gobollada Dalka, ayaa Toddobaadkii hore sheegay in Bas weyn oo ka mid ah Gaadiidka Shirkadda oo Dad u siday Magaalada Ceerigaabo ay rasaaseeyeen Rag aan Haybtooda la aqoonsan, kuwaasi oo ah kuwa uu Badhasaabku sheegay in Falka ay ku kaceen la baadhayo.
Maamulka Shirkaddu waxay sheegeen in Baska laga banjariyey Taayirada qaarkood oo Rasaas lala dhacay, wallow aanay waxba soo gaadhin Dadkii uu siday.
Dhinaca kale, Xayawaanka Diinka ee Badhasaabku sheegay in la ugaadhsanayo ayaa ka dambeeyay ka dib, markii Toddobaadyadii u dambeeyay ay soo baxayeen Warar sheegaya in Diinka lagu kala iibsanayo Magaalada Muqdisho isla-markaana Qofkii keena Diin marka Mobillada qaarkood la dul-saaro ay bakhtiyayaan ama Aanteenadu la tagayso lagaga iibsanayo Lacag gaadhaysa illaa konton kun oo Dollar, wallow aanay jirin cid caddaynaysa waxa Dadka iibsanayaa uga dan leeyihiin.
Wararkaa ku saabsan kala iibsiga Diinka ee ka dillaacay Magaalada Muqdisho, ayaa sababay in Dadka ku dhaqan Gobolka Sanaag bilaabaan ugaadhsiga Diinka.